Sida loo rakibo macOS Sierra 10.12 oo xoqan, talaabo talaabo ah | Waxaan ka socdaa mac
Jordi Gimenez | | macOS Sierra, Tababarada
Waxaad rabtaa ka rakibo Sierra? Waxaan eegeynaa nidaamka cusub ee Apple ee loogu talagalay Mac-yada isla markaana aan ku soo dejisanno kumbuyuutarkeena, waxa aan kugula talineyno waa in laga soo raro xoq si loo baabi'iyo wixii kale ee codsi ee la tirtiray, khaladaadka ama wax kasta oo wax u dhimi kara khibrada nooca cusub ee nidaamka.
Runtu waxay tahay in noocan ah cusbooneysiinta muhiimka ah lagu talin karo in laga sameeyo xoqan inkasta oo aysan ahayn shuruud lagama maarmaan ah, taasi waa, Haddii aadan rabin inaad ku rakibto macOS Sierra xoqitaanka, si fudud uga soo dejiso Mac App Store oo guji rakib. Markii hore, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad sameyso kayd haddii ay wax qaldamaan, laakiin mabda 'ahaan kama qarsoona wax intaas dhaafsiisan intaas. Kadibna haddii aad tan akhrinaysid waa sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad rakibto macOS Sierra laga bilaabo xoqitaanka Mac-gaaga, sidaas darteed Aynu aragno tallaabooyinka lagu sameeyo USB Bootable.
Marka hore xusuusi dhamaan isticmaaleyaasha doonaya inay cusbooneysiiyaan Mac-kooda inay xoqan yihiin dhowr hab oo si buuxda u ansax ah si loo fuliyo rakibo nadiif ah laakiin waxa aan marwalba isticmaalno waa qalabka DiskMaker kaas oo si toos ah loogala soo bixi karo bogga rasmiga ah iyo halkan waxaan kaaga tagnay xiriiriye. Xaqiiqdii waa hab loo sameeyo USB-ga bootable-ka ah iyo in lagu rakibo nidaamka cusub ee qalliinka xoq si fiican ayeyna noogu shaqaysaa markaa marwalba waan ku celcelinaa. Nidaamku wuxuu aad ugu eg yahay waqtiyadii hore laakiin waxaan arki doonaa talaabo talaabo ah si wax walboo ay u cadaadaan bilowga.
Faahfaahin muhiim ah oo ku saabsan kiisaskan ayaa ah in rakibidda laga soo bilaabo xoqitaanka ama xitaa haddii aan dooneyno inaan si toos ah ugu cusbooneysiino nidaamka hadda jira, waa in lagu sameeyo nidaamka oo dhan MacBook wuxuu ku xiran yahay router-ka adoo adeegsanaya fiilo isla mar ahaantaana ku xiran shabakada korantada si looga fogaado dhibaatooyinka suurtagalka ah ee soo dejinta iyo cusbooneysiinta labadaba.
1 Qaab USB / SD
3 Ku rakibidda macOS Sierra 10.12
4 Xog muhiim ah
Qaab USB / SD
Waxa ugu horreeya iyo haddii aan dooneyno inaan horumarinno shaqada inta macOS Sierra Sierra 10.12 cusub laga soo dejinayo Mac-dayada, waa in la sameeyo qaab ka mid ah USB ama kaarka SD 8GB ama ka sareeya in aan u baahanahay rakibaadda nadiifka ah ee nidaamka qalliinka markaa waxaan ku xireynaa dekedda USB-ga ee Mac-da oo aan bilaabi karnaa. Nidaamku waa sahlan yahay oo waa inaan galnaa Qalabka Disk taas oo ku jirta Kuwo kale fayl gudahood Launchpad. Markaad gudaha gasho waxaan doorannaa USB / SD oo guji inuu masaxo, waxaan kudaraynaa el Foomka: Mac OS Plus (Socdaal) oo waxaan u dhignaa magaca aan dooneyno ama si toos ah macOS Sierra. USB ama kaarka SD ee loo adeegsaday hawshan gebi ahaanba waa la tirtiri doonaa, markaa ka taxaddar xogta aan ku hayno ka hor inta aanad hawsha fulin.
Mar haddii USB / SD-gayagu diyaar yahay, qalabka DiskMaker-ku wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo diskiga la qaadi karo iyo soo dejinta macOS Sierra ee Mac-dayada, waxaan bilaabi karnaa hawsha. Iyadoo USB / SD ay ku xiran yihiin Mac dhagsii astaanta DiskMaker ku saabsan ikhtiyaarka ah rakibi OS X El Capitan (waxaan u maleyneynaa in macOS Sierra uu dhawaan soo muuqan doono) si fiican ayuu u shaqeeyaa leh macOS Sierra oo guji soo dejinta hore loo sameeyay ee macOS Sierra oo ku jiri doonta galka codsiyada adigoo rakibaya.
Hadda waxay na weydiineysaa lambarka sirta ah ee maamulaha sidaas ayaan u dhignay iyo dhagsii sii wad. Hadda waa waqtigii la sugi lahaa habka rakibidda si loo dhammeeyo 8GB USB / SD haddii ay xoogaa aamusnaato, waa iska caadi. Sinnaba sinaba uma xidhi doono barnaamijka, ka furayn doono USB / SD-ka Mac-ga ama dami kombiyuutarka. Marka aan dhammeyno waxaan bilaabi karnaa macOS Sierra habka rakibaadda nadiifinta on our mashiinka.
DiskMaker Waa la cusbooneysiiyay si loo taageero macOS Sierra. Laakiin haddii aysan adiga kuu shaqeyneynin, waxaa jira isticmaaleyaal howsha ka soo qabtay qalab DiskCreator. Qalabkan ugu dambeeya wuxuu aad ula mid yahay DiskMaker oo loo adeegsado abuurista USB-ga.
Nidaamku wuxuu qaadan karaa waqti dheer, markaa ku sabir. Haddii qalad muuqdo dhamaadka, ha ka welwelin, waa sababta oo ah qalabku dhab ahaan diyaar uma ahan macOS Sierra Qalabku hadda waa mid cusub oo hawshu si wanaagsan ayey u socotaa. Tan waxaan ku eegi karnaa USB / SD oo haddii rakibayaashu ka dhex muuqdaan gudaha waxaan gujinaynaa helitaanka macluumaadka ku saabsan (cmd + i) iyo waa inay qabsataa 4,78 GB oo boos ah. Haddii ay arintu sidan tahay, howshu si wanaagsan ayey u dhacday.
Ku rakibidda macOS Sierra 10.12
Marka hawsha DiskMaker ee USB / SD la dhammeeyo, waxaan u gudbi karnaa waxa aan runtii xiiseyneyno, taas oo ah rakibaadda nidaamka on Mac. Si aad u bilawdo hawshu waa mid fudud sida deminta Mac leh USB / SD oo ku xiran oo kaliya xilligan la bilaabayo waxaan qabanaa furaha Alt Bilawga bilowgu inuu muuqdo, waxaan doorannaa xusuusta USB ama kaarka SD halka aan ku hayno rakibaadda macOS Sierra waana intaas.
Hada waa markigeenii masax OS X El Capitan ee Mac-da iyo u ah Waxaan doorannaa ikhtiyaarka 'Disk Utility' oo waxaan ka tirtirnaa qaybkeenna OS OS-da hadda ka tagaya el Foomka: Mac OS Plus (Socdaal). Waxaan ka baxeynaa Disk Utility waxaanan sii wadeynaa rakibidda macOS Sierra. Marka hawshu dhammaato, waxaan hadda ku raaxeysan karnaa nooca cusub ee nidaamka hawlgalka oo leh rakibid nadiif ah oo gebi ahaanba ah.
Waxaan had iyo jeer kugula talin doonaa rakibida cusbooneysiinta kumbuyuutarrada, ha ahaadaan Mac, iPhone, Apple Watch, Apple Tv, iwm, sababta ugu weynna waa nabadgelyada cusbooneysiinta ee na siisa iyo sidoo kale wararka.
Qalab nadiif ah ama cusub ma qasabbaa? maya, maahan, laakiin markasta oo aan ka boodno mid ka mid ah nidaamka qalliinka una gudubno mid kale waa xiiso leh in la nadiifiyo Mac-ga iyo taas, maxaa ka wanaagsan in la rakibo xoq. Dhanka kale, haddii aan ka fogaan karno raritaanka keydkeena Mac, markaa si fiican, waxaan horey u ognahay inay adag tahay in la rakibo barnaamijyada mid mid iyo kuwa kale, laakiin waa inaan ka fikirnaa in tan mar kaliya la sameeyo sanadka iyo Mac iyo khibradeena isticmaalaha ayaa qadarin doona.
Waxaan horey u iri inay jiraan habab dhowr ah oo lagu fuliyo rakibo nadiif ah ama laga bilaabo xoqida macOS Sierra ee Mac, laakiin shaqsiyan waan jeclahay midkaan kalsoonidiisa sanadba sanadka ka dambeeya iyo maxaa yeelay waxaan haystaa rakibayaa sanadka oo dhan haddii ay jirto wax Dhibaatada Mac ama guuldarada. Ma aha shuruud lagama maarmaan u ah in la cusbooneysiiyo Mac ka xoqTaasi waxay kuxirantahay qofkasta, markaa adoo galaya Mac App Store, adigoo gujinaya soo dejinta kadibna cusbooneysiiya, waxaan sidoo kale yeelan doonaa nidaamka cusub ee lagu shaqeynayo Mac-keena.
Ku raaxayso macOS Sierra!
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo rakibo Sierra-ka xoq
Sideen uga soo dejisan karaa pc
Ku jawaab Francis Peña
Aad baad ugu mahadsantahay macluumaadkan muhiimka ah, maadaama aan doonayay inaan cusbooneysiiyo 0.
Waxaan haystaa qayb (waxaan u maleynayaa in sidaas la yiraahdo) oo leh Windows .. sameynta rakibidda sida ay yiraahdaan miyaan waayi lahaa?
Jawaab Yasmina Macías Pérez
Nieves Casas hahaha waad ila jaajuustaa !! Sikastaba, waan hubaa hadii aad iibsato inay imaaneyso iyo hadii kale ... waxay kuxirantahay halka ay ku rakibayaan halkaas, maxaa yeelay kumbuyuutarka muuska ayay igubiiriyeen inaan uqaato si aan ulaqabto iyaga marka ugu dambeysa cusboonaysiin
Haddii aad wax ka soo rakibto xoqida waxaad lumineysaa jajabyada la abuuray laakiin markaa waad dib u cusbooneysiin kartaa. Ka fikir in ku rakibidda laga bilaabo xoqitaanka ay ka dhigan tahay tirtiridda wax kasta oo aad ku haysato Mac-gaaga (had iyo jeer iyada oo keydka la haysto) oo ay ku jiraan qaybaha, xogta iyo kuwa kale.
Jordi Waxaan u maleynayaa inaanan kugu raacsanayn, haddii aad marka aad rakibtid 0 waxaad qaabeeysaa oo keliya qaybta loo yaqaan 'OS' halka OS-ga uu tagayo, qaybta kale wali way sii jirtaa
Jawaab si aad u kobciso bertomeu
Xaq, waad qaabeyn kartaa qaybta 'macOS', laakiin waxaa macquul ah in dadka isticmaala badankood marka ay qaabeeyaan diskka oo dhan, ay dhibaatooyin yihiin. Dabcan, waxa aan kugula talinayaa waa inaad ka tagto oo kaliya Mashiinka Waqtiga iyo xaalada ugu fiican si aad ugu sameyso kaydinta disk banaanka ah si aad u nadiifiso diskiga uu OS ku socdo oo aan dhibaato ku qabin. Sidan ayaa diskiga loo wada qaabeyaa waana marka dhibaatooyinka suurtagalka ah laga fogaado sanadka oo dhan.
Aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirintaada Enric
Jilaagii Jose Fco dijo
Ii cafi si aan u galo wadahadalkaaga laakiin waa dambi in cherry lagu rakibo mac. Fikradayda eee
Jose Fco Cast hahaha Waxaan u isticmaalaa kabtanka maalin kasta laakiin ujeedo waxbarasho awgeed waa inaan raadiyaa noloshayda si aan u awoodo inaan u isticmaalo barnaamijyo isku mid ah fasalka iyo inaan ku samayn karo oo kaliya Windows, waana ku mahadsan tahay Ilaah Apple wuxuu siiyaa ikhtiyaarkaas (laba hawlgal nidaamyada lagu rakibay)
Waad ku mahadsantahay inay fiican tahay, marka aad rakibida ka bilowdo xoq, sidee baan uga soo saaraa codsiyada iyo xogta i xiiseyneysa keydka?
Waad salaaman tihiin FidelWare, oo ka socda Mac App Store codsiyada oo ay la socdaan Time Machine waxaad ka heli kartaa xogta aad u baahan tahay.
Diskka lama abuuri karin cilad darteed: cilad ayaa dhacday: -10006. Raadiye ayaa khalad soo ogaaday: Ma dejin karo diskka "Ku rakib OS X El Capitan" illaa "DMX_Workdisk".
Waxaan isku dayay laba jeer, guul la'aan.
ayaa lagu caddeeyay maqaalka. Ciladani waa mid caadi ah maxaa yeelay aaladdu markii hore ma taageerto macOS Sierra, laakiin dhab ahaantii rakibaha ayaa la abuuray.
Iyada oo leh DiskMaker X, ma awoodi kartid, tani waxay u muuqataa dhammaadka -_-
Jawaab Hugo Diaz
Khaladka waa la tuuray maxaa yeelay waxaan u sheegnaa inuu yahay El Capitan oo runtiina waa macOS Sierra laakiin wehelka bootable-ka ah ayaa si isku mid ah u shaqeeya.
ASObjC Runner.app ayaa i weydiisa
Waad salaaman tihiin 16,
Tan waxaan ka helay fakadka diskmaker:
Waan sii wadaa la kulanida ASObjC Runner qalad (Error -43. Faylka ASObjC Runner lama helin)!
Midkani waa mid khiyaano badan. Waa cillad si aan kala sooc lahayn ugu dhacda Liiska DiskMaker-ka oo aan lahayn sharraxaad dhab ah, marka laga reebo qaar ka mid ah qaladka sireed.
Sida kaliya ee aan kuhelay ee dhibaatada ka saari kara waxay noqon kartaa:
Isticmaal Kormeerka Waxqabadka (gudaha / Applicationsl / Utilities) si aad uga joojiso tusaale ahaan ASObjC Runner;
Dib u soo celi Mac-gaaga;
Hubi mar kale haddii ASObjC Runner uu wali ku shaqeynayo Kormeerka Waxqabadka;
Kadib mar labaad daah fur Libaax DiskMaker iskuna day inaad dhisto diskigaaga.
Sidoo kale mararka qaarkood, adeegsiga kalfadhi kale oo nadiif ah ayaa ku caawin kara.
Haddii aad wax aragti ah u leedahay dhibaatadan, fadlan ila soo xiriir.
Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto, tixgelin
Waxaan helayaa qalad markay dhammaato ... haha ​​been! Maqaal aad u wanaagsan! Mahadsanid!
Ku jawaab sebagno
Way igu sii socotaa aniga laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay sababtoo ah waxaan heystaa beta-ka macOS sierra.
Aad baad ugu mahadsantahay caawimada.
Sidee la yaab leh ... ma ahan inay dhibaato noqoto in beta-ka macOS Sierra la rakibo,
Noo sheeg haddii aad xal u hesho asxaabta kale.
hahaha, waxaad noqon doontaa ...
Wuu ku guuldareystay inuu sameeyo hubinta saxiixa mushaharka rakibayaasha, caawimaad kasta ?????
Ku jawaab nacho moreno
Waxay i siinaysaa isla qaladkii, waan damiyay oo waan sii daayay oo ma jiraan wax rakibay. Waa inaan ka soo celiyaa Time Machine.
Haye, Qalabka DiskMaker ayaa la cusbooneysiiyay oo bixinaya taageerada macOS Sierra mana aha inuu dhibaato sii ahaado. Qodobka horeyba waa loo saxay sidoo kale.
Sababtoo ah mac-gaagu kamaqan yahay waqtiga iyo taariikhda, samee waxyaabaha soo socda.
1º Tag shaashadda rakibaadda weyn, tag utility-yada, oo fur ebute-ka.
Haddii aad leedahay xiriir wifi ku xir,
2ºy maadaama aad kujirto shabakada ku qor terminalka,
"Taariikh" Iyadoo aan xigashooyinka dabcan la helin !.
Waqtiga iyo taariikhda ayaa soo muuqan doona ,,,
3º Si aan kuugu cusbooneysiiyo waqtiga saxda ah adeegaha tufaaxa, qor amarka soo socda.
ntpdate -u time.apple.com iyo garaacista Soo noqoshada.
Ku jawaab CesarAugusto
Mahadsanid CesarAugusto. xalkaagu wuu fiicnaa….
Habeen wanaagsan Miyaan masaxaa oo keliya qaybta Macintosh HD ama miyaan masixi karaa diskka oo dhan dhib la'aan?
Halkaas isticmaale kastaa wuu samayn karaa sida uu rabo, waxaan kugula talinayaa wadarta tirtirka diskiga (ilaa inta aad haysato nuqul Time Machine ah oo ku hubsan disk kale) laakiin waad tirtiri kartaa oo keliya qaybta qalliinka qalliinka oo aad ku rakibi karto halkaas.
dib u soo celin91 dijo
Waad salaaman tahay, waxaan ku sameeyay labada barnaamijba horeyna waan u cusbooneysiiyay waana sii wadaa isla khaladka aan sameynayo, maxaan u xallin karaa? Horay ayaan uga soo kabtay waxna ma rakibi karo 🙁
Ku jawaab mar labaad91
Waxaan marwalba rumeysnaa, si qalad ah, kadib rakibidda nadiifta ah inaan dib u raro wax walba iyadoo la kaashanayo Mashiinka Waqtiga, hadda waxaan fahamsanahay inaysan ahayn inay sidaas oo kale noqoto, laakiin kaliya waxaan ka fekerayaa inaan ku dhejiyo dhammaan muusigeyga muusigga diskiga mar kale si daacadnimo ah waxaan rabaa inaan cusbooneysiiyo Runtii ma inay sidan ahaataa?
Waxaan sameeyay habka abuurista pendrive-ka ee Disk Maker, ka dib markii aan qiyaastii 7 daqiiqo rakibay, qalad ayaa soo muuqday: mar labaad rakibo, Waxaan abuuray pendrive markale waan dib u rakibey waxayna u muuqataa si isku mid ah ... fadlan caawi.
Waad salaaman tahay Jordi, waxaan fuliyaa howsha aad horey u sheegtay oo dhan sida aad wax uga dhiibatayna qalad baa igu dhacay Markii aan helo macluumaadka ku saabsan (cmd + i), waxay igu mashquulsan tahay 4,6 Gb mana ahan 4,78 GB ee aad tilmaamtay.
Waa inaan u qaatay in rakibayaasha aan si sax ah loo soo guurin
Waxaan ku sameeyay disk adag oo leh 3 qaybood, kuwaas oo kala ahaa: BARNAAMIJYADA DMG, MAGAALADA WAQTIGA iyo OSX INSTALLER. Waxaan u adeegsaday barnaamijka inaan ku rakibo macOS qeybinta rakibayaasha diskka la saari karo waana maxay layaabkeygu ... Barnaamijku wuxuu tirtiray dhamaan disk-kii adkaa oo wuxuu tilmaamay qeybtaas ... Nasiib wanaag waxaan sameeyay nuqul ka mid ah barnaamijyada ka hor ...
Jawaab David G.
Waad salaaman tahay, waxaan ku sameeyaa nooca cusub ee Diskmaker X 6 oo horeyba u taageeray macOS Sierra wuxuuna i siiyaa khaladaad. Midkood waa tan:
Khalad ayaa dhacay: -10006. Raadiye ayaa khalad soo ogaaday: Disk "Ku rakib macOS Sierra" looma dhigi karo "DMX_Workdisk"
Ku jawaab Dareg
Dhammaan kuwa guuldaraystay, isku day inaad mar labaad soo gasho Diskmaker oo aad ku abuurto rakibaadda nooca cusub
http://diskmakerx.com Waxaan cusbooneysiineynaa maqaalka. Shakhsiyan waan rakibey xalay fiidkii dhibaato la'aan lakinse diskmaker casriyaysan ayaa kafiican.
Waxay ku jirtaa nooca cusub ee aan khaladaadka ku helo.
Akhlaaqda Victor dijo
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Waxaan hada soo degsaday nambarkii ugu dambeeyay ee diskmaker-ka 1 saac kahor waxayna ii sii diraysaa qalad la mid ah kii ay sheegayeen "DMX_Workdisk". Waxaan horey u hubiyey / Muga iyo waxba noocyada kale, waxaa jira oo kaliya Mac OS sierra. Abuur USB markale, dib u bilow oo waxba. Wax kasta oo adiga kuu shaqeeyay
Ujawaab Victor Morales
ciidanka badda dijo
Way sii siineysaa qaladka -10006 ugu yaraan aniga.
Ku jawaab ciidanka badda
Subax wanaagsan, sideen ku ogaadaa geedi socodka nuqulka macOS Sierra xasuusta?
Subax wanaagsan, qiyaas intee le'eg ayay ku qaadanaysaa macOS Sierra in lagu rakibo xusuusta?
Waxay i siineysaa qaladka: "Waan hubin kari waayey saxiixa culeyska rakibayaasha"
Dhammaan waxaan ku sameeyay DiskMaker-ka cusub laakiin qalad isku mid ah ayuu i siiyaa mar kasta: S
Xal isii isii fadlan !!!
Waad ku mahadsantahay Jordi
Jawaab Helena Lopez
Su'aal ayaan ka qabaa macOSSierra, ma u oggolaanaysaa rakibidda barnaamijyada ka baxsan App Store? Waxaan sidoo kale haystaa pendrive oo u muuqda miis jajab hage ah mana tirtiri karo. Iima siineyso ikhtiyaarka aan ku abuuri karo qayb iyo hagaha. Waxay igu dhacdaa aniga kaliya pendrive. Sideen uga tagi karaa warshad ahaan?
Waxaan rakibay Diskmaker-ka cusub qaladna wuu i siiyay, waxaan isku dayay inaan ku soo ceshato Time Machine qaladna wuu i siiyay. Hadda waxaan isku dayayaa inaan ku laabto qaabkii warshad (cmd + R). Waxaan arki doonaa alifaadka …… halka uu ka soo baxo.
DiskMaker ma shaqeyn, waxaan isticmaalay Install Disk Creator oo wuu shaqeeyey 100%.
Aad baad ugu mahadsantahay hagaha.
Waad ku mahadsantahay tabaruca Ricardo waxaan ku xisaabtami doonaa casharrada mustaqbalka! Sikastaba DiskMaker-kaygu sifiican ayuu ii shaqeeyey.
Mahadsanid Richard! Ma aanan ogeyn taasna wax dhib ah malahan oo waxaan diyaar u ahay inaan ku rakibo 0.
wanaagsan, waxaan isku dayay inaan ka soo rakibo mac-ka waxaana helayaa qalad isku mid ah "ma hubin karo saxiixa mushaharka rakibayaasha", oo waxba ma jiraan.
qof ayaa horay u haysta xalka
ma jirtaa hab lagu rakibo dabayaaqadii 2008 mac?
Ka taxaddar in barnaamijka "DiskMaker" uusan la shaqeynin OS Sierra. In kasta oo xaqiiqda ay tahay in la is waafajin karo, haddana kuma sii socoto in la keydiyo macluumaadka, waxay ka tagaysaa kalabar (taas ayaa igu dhacday). Waan dhibtooday, ilaa aan ka helay barnaamijka kale ee ku xusan qodobkan «DiskCreator» haddana waan faraxsanahay .. haha ​​😀
Galab wanaagsan, waxaan doonayay inaan si toos ah ugala soo dego dukaanka app-ka, si ay otomaatig ahaan u cusbooneysiiso, laakiin waxaan helay qalad oranaya “diskkani ma adeegsanayo nidaamka miiska qeybta GUID, mana garanayo waxa aan sameeyo. Waxaan kuu hayaa x kabtanka oo sifiican ayuu iigu shaqeeyaa, maxaan sameeyaa? mahadsanid.
Waxaan ku abuuray DiskCreator waxaan helay fariinta: «Hubinta saxeexa xiraha rakibayaasha lama samayn karo».
Waxaan horey u tirtiray qeeybteyda soo kabashada hadana waxkastoo dib udajin karo majiro, kaliya waxaan kahelaa ikhtiyaarka kabashada khadka tooska ah laakiin aniga iima shaqeyso aniga, ma aqaano wax dambe oo aan sameeyo, kaliya waa inaan u qaadaa taageero bakhaar! 🙁
Si daacadnimo ah, ma arko wax faa iido ah oo aan ka soo rakibayo xoqida. Xitaa midka boggan lagu abuuray wuxuu leeyahay "... markasta oo aan ka boodno mid ka mid ah nidaamka hawlgalka oo aan u gudubno mid kale waxaa xiiso leh in la nadiifiyo Mac-da", sidaa darteed looma baahna in dhibaatooyin la galo. Waxaan isku dayay inaan furo mid iyo barnaamij kale wax walbana si fiican ayey u shaqeeyaan. Xitaa haddii "lagaa iibsado" App Store, Sierra uma muuqato xitaa haddii aad horeyba u soo dejisay.
Maxaa nolosha loo adkeeyay?
Ku jawaab Traven
Aan aragno haddii qof i caawin karo maxaa yeelay ma garanayo waxa uu sameynayo mar dambe ...
Waxaan hayaa macbook pro 13 retina laga bilaabo 2013, kaas oo 100% waafaqsan yahay mabda 'ahaan. Dabcan gurmad iyo sida ...
Waxaan hayaa laba rakibo (cusbooneysiin) Sierra iyo labadaba, markii la rakibo, waxaa lagu qaboojiyay barta wax lagu raro bilowga. Hadda waxaan sameynayaa dib u soo kabashada labaad. Laakiin kuma dhicin inaan sameeyo rakibo saddexaad maxaa yeelay waxaan ka baqayaa inaysan waxba is beddelin.
Waxaan ka gudbay Nadiif My Mac, Onyx, dhowr antivirus, mabda 'ahaan wax walboo nadiif ah. 100gb disk adag ...
Ma aqaano haddii aan ku dhiiran karo in aan wax ka soo rakibo xoqida maxaa yeelay waxaan hubaa inaan lumiyay barnaamij uun
Qof ma ku dhacday? Qof ma i caawin karaa?
Markii aan xiro macbook-ga oo uu bilaabmo waxaan riixaa Alt. Boot disk-ka ayaa soo baxa laakiin USB-ga leh Sierra ma muuqdo. Ma aqaan sida loo muujiyo. Maxaan khaldamayaa?
Jawaab ku bixi Bruno Pasetti
Weli waxaan haystaa dhibaato isku mid ah, waxaan horeyba u tijaabiyay dhamaan aaladaha aan kor kusoo xusay si aan uga dhigo macOS sierra bootable, waxay tuureysaa qaladka "xaqiijinta saxeexa xamuulka xaraashka lama fulin karo" Ma jiraa qof xal u helay tan?
Jawaab Luis G
Haye, isla dhibaatadaa ayaan qabaa. Markay dhammeynayso rakibidda MacOs Sierra ee laga soo iibsan karo USB-ga, waxaan helay khaladka "ma fulin kari waayey xaqiijinta saxeexa rakibayaasha rakibaadda" waxayna iga qaadaysaa rakibidda. Ma jiraa qof yaqaan sida loo saxo?
Ku jawaab egarcia2c
Xalka dhibaatada waxaan uga tageynaa "saxiixa saxanka culeyska ..." https://www.soydemac.com/solucion-la-problema-la-instalacion-macos-sierra-no-se-ha-podido-realizar-la-comprobacion-firma-la-carga-util-del-instalador/
salaan oo noo sheeg
Jordi Waad ku mahadsantahay kaalmadaada wanaagsan. Waxaan kuu sheegayaa in aan dhib ku qabo "saxiixa mushaharka" hase yeeshe xalka halkaan lagu soo bandhigay aniga maahan, tan iyo taariikhda iyo hadda xogtu waa sax. Soo jeedin kasta?
Jawaab Ed Rdz
Nabade Ed Rdz, inkasta oo waqtigu fiicanyahay, gacanta ku beddel. Tani waxay hagaajin kartaa dhibaatada, kaliya waxay raadineysaa inay hubiso inay caadi tahay inaysan ku filneyn. Buugga uga dhig Terminalka.
Dhinaca kale, haddii ay taasi kuu sheegto, isku day inaad si toos ah u cusbooneysiiso adigoon haynin kaydinta ama bilowga internetka. Miyaad badeshay Mac disk-kii? Mac maxaad haysaa
Galab wanaagsan, markaan isku dayo inaan rakibo, qalad baa igu dhaca anigoo dhahaya waxaan horey u rakibay 10.2, laakiin kabtan ayaa ii rakibay. Xal kasta?
ma haysatay noocyo beta ah oo lagu rakibay Mac-gaaga? Tani waa wax lala yaabo inaad faallo ka bixiso maxaa yeelay nooca Sierra waa 10.12
Waad salaaman tihiin, maalin wanaagsan, howsha waan qabtay laakiin markii aad rakibaysaan oo horumarka barku oranayo "0 ilbidhiqsi ayaa hadhay" halkaas ayuu ku hadhayaa, mana sii socdo ama waxba ma sameeyo, mar baan sameeyay oo waxaan sugayay ilaa 8 saacadood, ka dib markale ayaan sameeyay howsha waxayna qaadataa 3 saacadood tan iyo markii ay muuqatay waxbana. Maxaan sameyn karaa? Waxaan hayaa macbookpro 2011
Jawaab ivan Flores
Markaad isku deyeyso inaad ka dhigto USB bootable-ka DiskMaker wuxuu igu tuurayaa fariinta soo socota: «Erasing drive '/ Volume / USB' ..» ma fahmayo farriinta <>
Isku mid ma ku dhacdaa qof? Xal kasta?
Waad salaaman tahay, xal ma heshay? Isla waxbaa nagu dhaca !!!
Waad salaaman tahay Carla, haa, imaatinno badan iyo tagitaan badan kadib waxaan awooday inaan xalliyo. Waxaan isku dayay kun jeer DiskMaker X mar walbana qalad ayaan helay .. Xalka: DiskCreator !! 🙂 Waxaan ku siin doonaa xiriiriye soo-dejinta ka dibna ii sheeg sida ay u dhacday. https://macdaddy.io/install-disk-creator/
Waxay ku sii jirtaa baarka calaamadda maran oo wax kale ma sameyneyso, ka dibna isla waqtigaas way damineysaa oo sidaas ayey u soo noqnoqotay. Waa maxay hgfo?
Dhibaato isku mid ah ayaa i haysata, markii aan hubiyo ilaa 4.2 gb oo aysan ka muuqan qashinkeyga kabaha markii aan isku dayo inaan dib u bilaabo mashiinka ... kaliya waxaan helaa MAcintoch iyo Recovery ..
Ku jawaab Roky
Waxaan haystaa laba Imacs, mid ka socda 2009 iyo mid kale oo ka socda 2011, miyaan isticmaali karaa isla USB-ga lagu rakibo Sierra, si loogu rakibo nadiif kasta Imac kasta?
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa 2013 MAC oo wata nooca lagu rakibay markii aan u cusboonaysiiyayna nooca Sierra, way awoodi kari wayday inay gasho nidaamka qalliinka waxayna soo saartay fariintan "muggu wuxuu ka kooban yahay mac os ama os x rakibaadda oo dhaawici karta".
Maxaa iga walwalsan, waan ogahay in si qalad ah iyo kalsooni daro aan ku qabo MAC, aanan waligey sameyn wax gurmad ah
Ma garanayo haddii IOS Sierra lagala soo bixi karo USB (kombiyuutar kale) oo laga rakibo halkaas, iyada oo aan lumin xogta.
Ku jawaab annabelleguittard
Waad salaaman tihiin waxaan rabaa inaan u badalo saliyo laakiin waxaan hayaa Leopard kumbuyuutarkayguna waa laga bilaabo 2010.
Miyaan awoodi doonaa inaan si toos ah uga soo rakibo dukaanka Appel mise waa inaan rakibaa barnaamijka aad xustay marka hore si markaa aan u gooyo miinshaarta?
Waxaan isku dayay inaan rakibo raasumaal shabeel muddo labo maalmood ah mana ii oggolaaneyso inaan ku rakibo diskka jirka ee aan ku dhex haysto Mac-ga.
Waxaan ka akhriyay gole aanan rakibikarin saliyo haddii aan horay u rakibey shabeelka. Waa run?
Arrinta ah inaan xoogaa ku dhegannahay oo aan ku wareersanahay imtixaanka.
Ma fahmin waxa uu ula jeedo qeybta uu usbku u qaabeysan yahay, miyay tahay inaan ku xiro USB kasta oo ka mid ah mac?
Horay ayaan kaaga mahadcelinayaa; Salaan.
Waad salaaman tihiin, markiisi hore ayaan rakibey kabtanka ka dibna waxaan dhaafey mac os sierra mana aanan ka sameynin wax xoq ah oo macalkaygu wuxuu soconayaa dhamaadka 2009
Qayb intee le'eg ayaa lagu rakibay "MacOS Sierra" "hore", taas oo loo malaynayo in ay ku jirto codsiyada ????
Waad salaaman tahay, hadda waan cusbooneysiiyay mac os sierra, markaan daarana mackeyga sawirka shaashadda soo galitaanka waa bannaan yahay mana jiro sawir kale, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab Geordano
Waa salaaman tihiin dhammaantiin, ka dib markii aan dhammaantood sameeyay waxyaalahayga kor ku xusan ee 'MacBookPro' laga soo bilaabo 2011 ma aqoonsana wax kaararka SD ah ama 'PENDRIVE' ka dib markii aad wax badan ku qabteen Diskmaker x 7 ama xitaa Diskcreator. Laakiin waxaan isku dayayaa inaan sameeyo rakibid nadiif ah ka dib markii aan rakibey Sierra.
Ma aqaano haddii taasi ay tahay sababta markaan isku dayo inaan doorto darawallada boot-ka, kaarka SD ama Pendrive midkoodna uusan muuqan, kaliya uu yahay Hard Drive-ka uu laptop-keygu rakibay.
Qofna ma i siin karaa xalka si aan u arko haddii aan hal mar oo dhan samayn karo rakibid nadiif ah?
Waxaan rabaa inaan sameeyo rakibaaddaas nadiifka ah maxaa yeelay waxaan dhibaato ku qabaa Mail iyo macaamiisha kale ee boostada. Waqti furan kadib, waa la xiraa.
In aan ku maqlo ayaan sugayaa.
maxaa yeelay waxaan fariintan ka helayaa mac-kayga «erasing drive '/ volume / USB' ...» ma fahmayo fariinta «dhacdo sysonotf»
Sawirka meeleynta Maicol Callero dijo
iyo halkee ka helayaa rakibaadda macOS Sierra?
Jawaab Maicol Callero
Waxaan dhibaato ku qabaa isku dayga inaan rakibo.
Waxaan qaadaa dhammaan tallaabooyinka, laakiin markaan kombiyuutarka xiro, mar kale shid (USB-ga oo diyaar u ah rakibaadda) oo taabo ALT marka dhawaqa bilowgu dhaco, macku ​​uma aqoonsana USB inuu yahay disk boot. Kaliya waxaan arkaa bootka caadiga ah ee kumbuyuutarka. Maxaa sababi kara tan? Xal ma jiraa?
Ku jawaab Quifar
Salaan. Sidii oo kale ayaa igu dhacday. Muddo ayey igu qaadatay inaan xal helo. Haddii aad fiiriso USB-ga (halka aad ku haysato MacOS-ka, astaamaha Sierra ayaa soo muuqanaya iyo galka la yiraahdo "Utilities" marka aad furto, waxaad garwaaqsan tahay in codsiyada ay leeyihiin calaamadda "xaddid" mana furi kartid. Kuwani waa kuwo aad muhiim u ah , maadaama aad u adeegsan doontid markii aad format gareyneyso oo aad bootinka saareyso. Si aan u xaliyo, waa inaan aado USB kale oo uu horey u heystay MacOS El Capitan, nuqul ka samee codsiyadaas qeybta ay ku taal Sierra oo kaliya ayaa markaas la i gartay (adoo riixaya ALT at power up) Ma uusan sharxin sababta ay taasi u dhaceyso.Waxaan u maleynayaa inay tahay qalad DiskMaker ah.Haddii aad rabto codsiyada, emayl iigu soo dir eonyorch@gmail.com
Iga raali noqo Waxaan isku dayayaa inaan ku rakibo OS X SIERRA MAC-kayga aniga oo adeegsanaya USB When .. Markaan isku dayo inaan ka soo rakibo USB-ga, baarku wuxuu ku socdaa tufaax hoostiisa laakiin dhexda wuu qaboobayaa oo wareegyo midabyo ah ayaa soo baxaya oo aan soconaynin dhacaya maxaan sameyn karaa? Sidan oo kale ayaan uga soo tagay maalinna horay uma soconeyso waan ka xanuunsanayaa MAC nacladan 🙁
Jawaab Javier Alejandro Padilla
Aad baad ugu mahadsantahay ku darsigaaga.Qiimeynta aad doorbideyso inaad ka soo bilawdo xoq adigoon xareyn nuqulka Mashiinka Waqtiga, maxaad u maleyneysaa u guurista hal Mac ilaa mid kale iyadoo la adeegsanayo dalab la sheegay?
Aan kuu sharaxo, rakibo Mac cusub oo ka socota 0 oo aan u guuro xogtaada ka dib markii aad haysato jir aad ka timid Time Machine.
Suura gal ma ahan inaan sameeyo USB Bootable-kayga (waxaan isku dayay 8Gb iyo mid 16Gb ah)
Waxaan ku tijaabiyay DiskMaker X 6 oo waxaan helayaa qaladka «Erasing drive '/ Volume / BO16GB' ...» ma fahmayo farriinta «dhacdo sysonof» halkaasna kama dhacayso.
Sidoo kale waxaan ku tijaabiyey Abuuraha Disk. Waxay ii ogolaaneysaa inaan doorto cutubka dib u bilaabi doona iyo sidoo kale rakibaha, laakiin sida ugu dhakhsaha badan markaan dhagsiiyo badhanka "Abuuri Rakib", halkaas ayey ku sii jirtaa. Waxaan durba garaaci karaa badhanka 100 jeer oo aan waxba qabanaynin.
Sidoo kale waxaan ku tijaabiyay Disk Drive-ka. Gujinaya InstallESD.dmg ka dib soo celi oo u qoondeeya USB. Waxay ii sheegaysaa inay tahay inay sahamiso sawirka isha markii uu dhammaadana ay igu dhahdo "Lama sahamin karo InstallerESD.dmg (Waxqabadka lama fulin)" Gabi ahaanba ...
Waxaan ahay quus, qofna ma leeyahay fikrado kale?
Ku jawaab Leatus
Waxaan kaliya ku tijaabiyay UNetbootin iyo midkoodna…. Waxay leeyihiin waali ama waa maxay?
Jordi wanaagsan, ma seexan 3 maalmood sababtoo ah waxaan isku dayay inaan cusbooneysiiyo mac mini. Xaqiiqdu waxay tahay waxay ii sheegaysaa in la cusboonaysiiyay oo markay isku daydo inay bilowdo la tuuray habeenkii oo dhan baarkana uusan ka badnayn 2 ama 3 mm oo uusan bilaaban ... Xal kasta oo suurtagal ah? Waan qaniinayaa oo wareegyo madow ayaa igu jira hurdo yar maalmahan!
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa 13-inch macbook pro, bartamihii-2012, waxaan rakibay sirateri waana dilaa. Waxaan rabaa inaan rakibo yosemite oo diskmaker-ka ayay u muuqataa »tirtirka drive ma fahmayo dhacdada farriinta sysonotf» maxaan sameyn karaa?
Browser loogu talagalay Mac
Haddii aad ku raacdo iMac-gaaga, halkan waxaa ku yaal sanduuq difaac oo sarreeya